आगोसँग खेल्ने कोशिस नगर्न पुरीको चेतावनी | रेडियो झापा 100.7 MHz.
आगोसँग खेल्ने कोशिस नगर्न पुरीको चेतावनी
रेडियो झापा 100.7 MHz. बिहिबार, पौष १०, २०७६ १६:४७:५७
दमक । काठमाडौं, बालुवाटारको जग्गा घोटाला प्रकरण नसेलाउँदै झापा, दमकस्थित बालुवाटारको जग्गा कीर्ते प्रकरण अहिले चर्चाको शिखरमा रहेको छ । दमककै चर्चित युवा नेता गगन पुरी (रेवतराज पुरी) को नाम जग्गा प्रकरणमा जोडिएपछि यो विषय अझ चासो र चर्चाको विषय बनेको छ ।
कतिपयले गगन पुरीको नाम कीर्ते प्रकरणमा आएकोमा पत्याउन सकिरहेका छैनन् भने कतिपयले पुरीलाई निर्दोष छौ भने फेस गर साथ दिन तयार छौं पनि भनिरहेका छन् । तर, घटना उजागर भएको निकै लामो समय हुँदा पनि पुरीले भने फेस गर्न सकेका छैनन् । यसो हुँदा गगन पुरीको त कतै कैफियत छैन, भन्ने आशंका उनका शुभचिन्तकहरूले पनि गर्न थालेका छन् ।
दमक क्षेत्रमा सकारात्मक काम गरेर युवामाझ लोकप्रिय गगन पुरी घटना उजागर भएसँगै सम्पर्कविहीन हुनुले विभिन्न कौतुहलता उब्जाएको छ ।
गगन पुरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफूलाई लागेको दोषको सफाई दिने प्रयास गरेका छन् । उनले भनेका छन्– ‘तिमीहरु जुन जग्गालाई सरकारी र कीर्ते भन्दैछौं, याद गर त्यो जग्गा विगत ६० वर्षदेखिको हाम्रो पैत्रृक हो । प्रमाण छ मसँग पेश गर्छु ।’
‘कुनै बेला बालुवाटार रतुवा खोलाले सखाप पार्दा रतुवाको पाता फर्काउने मै हुँ । तिम्रो रिसले मेरो एउटा पनि रौं हल्लिदैन’ –उनले भनेका छन् ।
गगन पुरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस अपलोड गर्दै भनेका छन्,– जस्ट मैले सीआईवी डिआईजी र डिआईजी ठाकुर ज्ञवालीलाई र झापाका एसपी मैनाली जी र डीएसपी महेन्द्रजीलाई भाइबरबाट कल गरेँ रिसिभ गर्नु भएन, धन्यवाद ।
त्यसको एकैछिन पछि उनले फेरि अर्को स्टाटस हालेका छन्– ‘डिआईजी साव, एसपी साब मेरो कल रिसिभ गर्नुहोस् । डिएसपी महेन्द्रजी पोलिटिक्स गर्ने हो ? दमक डिएसपी तपाईं कुन आसयले दमक आउनु भो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
सरकारी कागजपत्र कुनै पनि व्यहोराले केरमेट गर्न, सच्याउन, थप्न हुँदैन, गरेमा कीर्ते हुन्छ । आरोपित पुरीका तर्फबाट नापी, मालपोत कार्यालयको ढड्डामा पाना थप गरिएको छ । मालपोत कार्यालयको ढड्डामा पनि पाना थप गरिएको छ । सरकारी खाता किताबमा पाना नम्बर हुन्छ । खाताकिताबमा पछि पाना थप्न पाइँदैन ।
दमकस्थिते बालुवाटारको करोडौं रुपियाँ पर्ने ५० बिगाभन्दा बढि जग्गाहरू घोटाला गरेर गगन पुरीले कब्जा गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको सिआइबिको बिशेष टास्क फोर्सले गोप्य छानबिन गरेको थियो र उक्त घोटाला काण्डमा मालपोत कार्यालय दमकको दुई जना कर्मचारीलाई पनि पक्रेको थियो । पक्राउ परेका कर्मचारीले जग्गा घोटालामा गगन पुरीको संलग्नता रहेको बताएपछि अनुसन्धानको सुई पुरीतर्फ तेर्सिएको हो ।
उक्त जग्गामा विगतमा ८८ घरपरिवार सुकुम्बासी बस्थे । उनीहरूलाई जग्गा दिन प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । तर, २०४० सालतिर रतुवा खोलामा बाढी आउँदा बस्ती बगायो । पूरै बस्ती बालुवाले भरियो । उनीहरूले ठाउँ छाड्नपर्यो । जग्गाको लालपुर्जा पनि सुकुम्बासीले पाएनन् । पछि रतुवा खोलामा तटबन्ध बनाइयो । तटबन्ध बनेपछि विगतमा डुबेको जग्गा मूल्यवान बन्यो । त्यही जग्गा किर्ते गरी हत्याउने काम गरेको आरोप नेता पुरीमाथि छ ।
के भन्छन् गगन पुरी
घटनाका सम्बन्धमा गगन पुरीले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा चार पृष्ठ लामो स्पष्टिकरण प्रस्तुत गरेका छन् । गगन पुरीले १० बुँदामा उल्लेख गरेको हस्तलिखित स्पष्टिकरणमा भनिएको छ–
१) दमक–८ बालुवाटारमा मेरा बुबा भगवान पुरी र आमा रुपादेवी पुरीको नाउँमा २०२१ सालमै दर्ता भएको करिब ३० विगाहा जग्गा थियो भन्ने कुरा त मैले भनिरहनै पर्दैन । सोही ३० विगाहा नम्वरी जग्गाको वरिपरी मेरो बुबाहरुले थप २० विगाहा जति जमिन त्यसैबेला देखि नै भोगचलन, जोतभोग गर्दै आएको कुरा पनि प्रष्टै छ ।
२) हाम्रो परिवारले भोग्दै आएको उक्त ऐलानी जग्गामा तत्कालीन पञ्चायतका वार्डअध्यक्ष श्री डम्बर बहादुर अधिकारीको रोहवरमा ८४ घर परिवारलाई (२०३६ सालमा) बसोबास गर्ने गराउने कार्य भयो । जसमध्येकै १० विगाहा नेपाल सरकारको जग्गा ओमको नाममा कीर्ते दर्ता भनि प्रचार गरिएको छ ।
३) पुनः २०३९ सालमा नेपाल सरकारबाट गठित सुकुम्वासी आयोगमार्फत् उक्त जग्गालाई करीव १२० कित्तामा कित्ताकाट गरी ती ८४ घर परिवारको नाममा फिल्डबुक कायम गरियो ।
४) छत्रबहादुर कार्की, जीतबहादुर भण्डारी, वीरबहादुर विक, मानबहादुर बिक, प्रेम कुँवर, पूर्ण श्रेष्ठ, खड्ग भण्डारीलगायतको नाउँमा नोपल सरकारले २०३९ सालमै फिल्डबुक बनाई जग्गा हस्तान्तरण ग¥यो ।
५) धेरै वर्षपछि ती जग्गाधनीहरु मध्ये केहीले बाहेक अधिकांशले घरायसी कागज गरी ती जमीनहरु बेग्लाबेग्लै ढंगले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बेच्न थाले ।
६) जग्गा किनबेच गर्ने क्रममा माथि उल्लेखित जग्गाधनीहरुले (हालको नेपाल सरकारको अनि ओम नाउँमा कीर्ते दर्ता भनिएको हो । जमीनलाई आफ्नो फिल्डबुकका आधारमा ती व्यक्तिहरुले धेर्ै वर्षअगाडि रोशन विष्ट, उमाकान्त आचार्य, युवराज थापा, मनोज घोषाई, असिम राई, बद्री राई, चन्द्रबहादुर कार्की, मनि तामाङ, नैनकला लुइटेल, दीपेन्द्र रिमाल, निधि ढुंगेल, पवित्रा पौड्याल, प्रेम कुँवर, प्रकाश विक र मसमेतलाई बिक्री गरेका थिए । हामीले उक्त जग्गा सम्बन्धित मान्छेहरुबाट घरायसी लिखत कागज गरेर खरिद गरेका हाऔं । यसरी खरिद गरेको जमिनमा धेरै वर्षदेखि हाम्रो भागचलन, घर(टहरा, जोतभोग छ । अब कसरी उक्त जग्गालाई नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक भन्न सकिन्छ । निर्धक्का साथ भन्छौं कि त्यो जमिन सरकारी होइन, हिजो पनि हाम्रै हो, आज पनि हाम्रै हो र भोलि पनि हाम्रै हो । तसर्थ कीर्ते गरेर सरकारी, खोलाको जग्गा हडप्यो भनेर नकुर्लिए हुन्छ । झन ओमको नाउँमा राख्ने कुरा त झन कल्पना बाहिरको कुरा हो । तर म भन्छु कि उक्त १० विगाहा क्षेत्रभित्र २ विगाहा जमीन मैले पनि खरिद गरी लिएको छु । दमकका जीतबहादुर भण्डारी र लखनपुरका छत्र कार्कीसँग उक्त जग्गा किनेको हुँ, प्रमाण घरमा छ ।
७) झापाका डिएसपी महेन्द्र श्रेष्ठजी केही कथित पत्रकार ज्यू, बेनामे उजुरीकर्ताहरु, पर्दाभित्र बसेर नाटक मञ्चन गर्ने तत्वहरुलाई मेरो चुनौती छ( तपाईंहरु एकपटक सम्बन्धित नगरका र वार्डका प्रतिनिधिहरु अनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित एक पटक उक्त जमिनको कानुनी र स्थलगत निरीक्षण गर्नुहोस् । अनि त्यो जमिनको वास्तविकता थाहा हुन्छ । कति वर्षदेखि कतिजनाले उक्त जग्गामा घरटहरा बनाई भोगचलन गर्दै आएका हुन् भनेर अनि थाहा हुन्छ, सरकारी हो कि होइन, कीर्ते गरेको हो कि होइन भनेर ।
७) गत स्थानीय तहको निर्वाचनको संघारमा केही साथीहरु बेनामे उजुरी हाल्न अख्तियार जानुभयो । त्यहाँ उहाँहरुले माओवादीको आडमा गगन पुरीले सबै खोलो दर्ता ग¥यो कारबाही गर्नुप¥यो भन्नुभयो । अख्तियार प्रमुख नविन घिमिरेलाई चुनावपछि मैले भेटेर २०२१ सालकै मेरो पुख्र्यौली सम्पत्ति भएको प्रमाण पेश गरेँ । ममाथि राजनीति गरियो तपाईं अन्यौलमा नपर्नु भनेँ ।
८) तिनै साथीहरु फेरि सीआईबी कहाँ जानुभयो । गगनले सबै सरकारी जमीन दर्ता ग¥यो हामीलाई औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न गाह्रो भयो भनेर इमोशनल ब्ल्याकमेल गर्नुभयो । तर, दमकवासी सबैलाई थाहा छ, औद्योगिक क्षेत्र दमक १० हो भने हाम्रो जग्गा दमक(८ मा पर्दछ । बाँकी आफैँ बुझ्नु होला ।
९) राजनीति, पार्टी र सरकारलाई कभर बनाएर केही सरुवा बढुवाको भरमा गुजारा चलाउने तर सांगठनीक, सामाजिक, राजनीतिक हैसियत नभएका, धरातल नभएका अपारदर्शी तत्वहरुको लोभ र सरुवा बढुवाको प्रलोभनमा परी राजनीतिक पूर्वाग्रह साध्न कानुनको चरम दुरुपयोग गर्ने महासयहरु विचार गर्नुहोला तपाईहरु पनि कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्न । दिन फर्किन्छ ।
१०) अन्तरसंघर्षलाई वर्गसंघर्षमा परिणत गराएर पार्टी, समाज र जनसमुदायमा पैदा ह्ँदै गएको उचाईलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भन्ने तिम्रा सपनाहरु पानीको फोकासरह हुनेछ । आपराधिक मानसिकताबाट ग्रसित तत्वहरु आगोसँग खेल्ने कोशिस नगर, छालको गतिलाई रोक्ने कोशिस नगर ।
अतः म एउटा राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति भएकोले मेरो जीवन र व्यवहार पारदर्शी हुनुपर्छ । ममाथि लगाइएको आरोपबारे मैले स्पष्ट पार्नै पर्छ । आगामी दिनमा थप प्रष्ट पार्नेछु ।